युएनएचसिआरद्वारा बूनपा ११ मा सामग्री हस्तान्तरण « Pariwartan Khabar
युएनएचसिआरद्वारा बूनपा ११ मा सामग्री हस्तान्तरण
२४ पुष २०७५, काठमाडौँ
युएनएचसिआरले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ११ स्थित स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र वडालाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
युएनएचसिआरले बूनपामा महिला तथा पुरुष शौचालय, पानी ट्याङ्की र सडक बत्ति बनाउने समान बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ११ लाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा हस्पिटल वेड, पोटेवल वेड स्किन, कुर्सि, अफिस टेवल कपन स्वास्थ्य चौकि तथा कम्प्युटर डेस्कटप, प्रिन्टर तथा बुक र्याक ग्रामशिक्षा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
बूनपा ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेल, उपप्रमुख रमादेवी राई, कपन प्रहरी प्रभाग प्रमुख मिन बहादुर कुँवर, युएनएचसिआरका कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ बुस्रा हलिपोटा, एलडव्लुएफका कन्ट्री डिरेक्टर डा. प्रविन मानन्दर, न्याय पालिका सदस्य भगवती निरौंला, शहरी स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्रका इन्चार्ज कामदेव आचार्य, ग्राम शिक्षाका प्रधानध्यापक रुद्र कोईराला लगायत अन्य अतिथिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा एलडव्लुएफका कन्ट्री डिरेक्टर डा. प्रविन मानन्दरले स्थानीय सरकार सँग मिलेर स्वास्थ्य शिक्षामा सहयोग गर्न पाउदा खुसि व्यक्त गरेका थिए । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्दा स्थानीय जनतालाई सहयोग पुगोस् भन्दै उनले दिगो विकासको लक्ष्यमा सबैलाई सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
उनी भन्छन्, नेपाल सरकारको प्रथामिकता जनताको आवस्यक्ता यसमै रहेर आँफूले काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
युएनएचसिआरका कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ बुस्रा हलिपोटाले सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै संस्थाको सानो सहयोगले सबैलाई सहयोग पुग्ने बताईन् । महिला तथा पुरुष शौचालयलाई सही रुपमा सदुपयोग र मर्मत सम्भार गर्न आग्रह गरिन् ।
३०० भन्दा बढि शरणार्थीहरु बसोवास गरेको समुदायमा तीन वटा आधारभूत आवस्यकीय वस्तुहरु हस्तान्तरण गरि सहयोग गर्न पाउदा खुसि समेत व्यक्त गरिन् ।
बूनपा प्रमुख उद्धव खरेलले बूढानीलकण्ठमा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सहयोग गरेका सामानलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बूनपा ११ का वडाध्यक्ष अधिकारीले वडाले सामान प्राप्त गरेकोमा खुसि व्यक्त गर्दै सबै समानको सहीरुपमा सदुपयोग गर्ने बाचा गरेक थिए । सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दा सबैलाई सहज रुपमा अगाडी बढ्न सजिलो हुने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य वडा सचिव मिरा भट्टराईले राखेकी थिईन् भने संचालन रमा विश्वकर्माले गरेकी थिईन् ।